* Mmelite：Ezinyere eziokwu na statsụlọọrụọhụrụ.
Ọlaghachiazụna 1985 mgbe aha ahambụna site na mgbeahụ、Intanetachọpụtawoọganihudịukwuu nke ngalaba aha njikwa.
AkụkọVerisign na-ekwu naụlọọrụngalaba na 2019（Q3）nwetara 5.1％uto kwaafọ、na-akụụman’ihefọrọnke nta kaọbụrụnde nde 360​​ nde、ndịga-aga n’ihu na-えと.
Nyere otu mkpadijitalụdịn’etitiọhana eze nke oge a、ọbụihe ezi uchedịna ya、maọbụnnukwuụlọọrụnchịkwamaọbụotu onyena-ahụmakadijitalụ、iji nweta aha.
Maànyịna-achọya maọbụnaọbụghị、ịnwetangalaba nke edebara ahagịn’akwụkwọbụihedịmkpa.
Ọbụrụnaịnweghiotu ma、maọbụnaanịchọrọobere nduzi na aha ngalaba、weena-agụihe。 Anyịga-ekekọrịtankọwagbasara otu esiazụma denye ahaọhụrụmakandịna-amalite!
WHSR nwetaụgwọntinyeakwụkwọsite n’akaụfọdụụlọọrụndịakpọtụrụaha na isiokwu a。 Ọna-eweọtụtụmgbalịna ego ijimepụtaọdịnayabara urudịka nke a-a kwadoro nkwadogịnke ukwuu.
3 最高のngalaba Ahaジェネレーター
3.5 5-Achọpụtangalaba ngalaba
3.6 6- Shopifyビジネス名ジェネレータ
4 Ego ole kaịkwụụgwọmaka ngalaba ahaọhụrụ?
5 Oleeotúịzụtaahaọhụrụngalaba si na-edeba aha?
5.2 2. Debanye ahagịna ngalaba aha na ngalaba na-edeba aha
6.1 Mmelite：Cloudflaredịka ngalaba Aha na-edeba aha
7 Kedu otu esizụtaaha ahadịugbu a n’aka onye nwe ya?
7.2 Otu esizụtangalaba site n’iji ntu
7.3 Esichọpụtauru nke onye nwechara aha ngalaba
7.4 1- Iji Na-ere NdenyeAhịa
7.5 2- Iji NgwudataAtụmatụNtanetịOnline
8 Debe na ngalaba、wee banyeọrụ
Mgbeịchọrọịmalitemkpokọtaweebụ、ịkwesịrịinwe ngalaba aha。 Ma ihe heckbụaha ngalabaọbụla?
Ọbụisi okwu nke okwu ana-apụghịịghọtana、mgbeịdeberena ihenchọgharịahụ、redire onyeọrụna IPgị.
Ịna-ahụ、mgbe e kereweebụ、ọna-abịakarịnaadreesịpụrụiche a maaradịka ngalaba Aha Servers（DNS）nke na-adịkarịka nke a：
Nke a siri ikeịmalitema bido。 Nkebụihe mere ngalaba ahapụrụichega-adịmfe makandịụrụiji cheta mapịnye.
Makankọwankọwandịọzọbanyere ngalaba aha、biko gwaa ndu Jerry.
Aha ngalabagịbụnjirimaragị。 Ọbụotúndịmmadụsiachọtagị、ahandịahịana-enyefendịọzọ.
O doro anya naọdịghịihedịmkpakarị.
Nyegịazụmahịaanzọụkwụna ezintụziakamaka buru zuru ngalaba aha-ebe abụole na oleAtụmatụnaotúe sichọtajụụngalaba aha.
Debe yadịmkpụmkpụmadịmfe icheta（ngalabaanyị "Webホスティングの秘密が明らかに" bụiheọjọọ！）
Nweta .com maọbụ.net mgbeọbụlaenwere ike
Atụlaegwuịkebeokwu maọbụjiri okwumejupụtara（chee-FaceBook、YouTube、Google、LinkedIn）
Dee ya magụọya ugboro ugboro tupuịzụta（iheatụ-kpachara anya maọbụrụna ahaazụmahịagịbụ "ディクソンウェブ"）
*マーラ：needchọghịisiokwu okwu na ngalaba ahagịiji bulie nkeọmana Google n’oge a。 Manaọbụezigbo echicheịkọisiokwu ngalabagịna isi okwugịdịkaọ-enyendịịbịaogembụechiche ngwa ngwa iheweebụsaịtịgịgbasara.
Ịkpọebenrụọrụweebụnwere ikeịbụezigbo nsogbu、karịsịamaọbụrụnaịbụọhụrụnaweebụsaịtịnaịmepụtaihe。 Maọbụrụnaịdịka m、ịnwere ike ijiọtụtụawatụgharịauche maka aha、naanịijimejupụtandepụtanke crappy.
Ebe abụole na ole ngalaba aha generators iji nyeregịaka iche echiche ngalaba aha echiche.
*Pịaoyiyi ijihụchalụihendịna-esonụna ngalabangwaọrụ.
Domainr ga-agbakwunye ihe mmemmepụrụiche nke creativity na ngalaba ahagịsite n’itinyeatụgharịọzọ。 Gaa na：Domainr.com
NdịọrụWordoid na-agaịmepụtaahandịna-enweghịaha maọbụtinye isiokwu iji jiri ya mee ihe。 Gaa na：Wordoid.com
Aha Ahana-edepụtaaha random na mana-enweghịmkpokọtamkpokọta。がな：AhaStation.com
Dot-o-matorbụngwáọrụdịmfe nkejikọtaraokwuabụọijimepụtaahaọhụrụ。 Gaa na：Dotomator.com
無駄のないngalaba検索bụnyochaọchụchọdịmfe makaịchọtaaha ngalabadịnụ。 Ngwaọrụahụna-enyerendịọrụakaịchọtangalaba aha site naịchọtaokwuọchụchọna isiokwundịọzọana-ahụkarịna ngalaba aha。 NgwaọrụahụbụAutomattic（ụlọọrụn’azụWordPress.com）na 2013. Gaa na：LeanDomainSearch.com
Shopify si Business Name Generator enyeregịakan’ịwaazụmahịaaha na lelee ngalaba aha nnweta。 Maliteサイトnaịhọrọisiokwuịchọrọka ngalabagịgụnye、ịga-enwetaọtụtụnarịaro。 Gaa na：Shopifyビジネス名ジェネレータ.
Ego ole kaịkwụụgwọmaka ngalaba ahaọhụrụ?
Ndenye aha na ntinye ohuru na-adabere nke ukwuu nandọtịya（amaradịka TLD）。 Na iheatụa na NameCheap、.com ngalabana-akwụụgwọ$ 10.98 /afọma meeọhụrụna otuọnụahịa。 N’aka nkeọzọ、astorestore ngalaba efu $ 4.99 /afọbandebanye aha ma $ 48.88 /afọijimegharịa.
Ya mere、tupuịgaa n’ihu wee nweta ahaọhụrụaha、ejiri m n’aka na enwereajụjụgbaraọkpụrụkpụịchọrọịjụ。 Nkeahụbụ：
O di nwute、enwere iwe nwere nike ike ikpebi ugwo aha aha。 Ụfọdụn’ime ihendịahụnwere ikeịbụ：
Mgbakwunye nke ngalaba aha（iheatụ：.com、.shop 、、。me）
Ebee ka e sizụọngalaba aha na（ndịna-edebanye ahadịiche ichedịiche iche）
Ogologo ogeahụmaọbụiheọbụlaọzọịnwere ikeịchọrọ（atụ：ịgbakwunyenzuzo ngalaba、ịgamakaọtụtụafọ、wdg。）
Ọbụezie naọna-esiri ikeịkọkpọmkwemókèngalaba aha nwere ike isi na-efu、ịnwere ikena-atụanyaịkwụụgwọọbụlan’etiti $ 2 na $ 20 kwaafọ、dabere na ego bụpụrụiche n’elu ikpo okwu na-enye.
Ụkpụrụisi nkeọmabụnaọpụpụngalaba（.global、.design ,, .cheap）nwere ike ibu ugwokarịaọnụegongalaba（.com、.net）、ebeọbụna emepụtaraha n’ogena-adịbegh .
ND＃MỌD＃＃1-ike nweta ngalabaakwụghịọgwọsite n’akaụfọdụndịna-eweta mba、gụnyereEnweMmasịna Hostinger。 Ijidọtandịahịaọhụrụ、ụfọdụụlọọrụBochum na-enyendịahịaahịambụngalaba n’efu。 Y’oburu na-akwadoweebụsaịtịmaka ogembụ、ịnwere ikeịchekwaụfọdụego site naịnabatandịọbịaweebụa.
NDMỌD＃＃2-NameCheap na-akwado nkwalitepụrụiche kwaọnwa-ịnwere ike lelee ibeweebụha tupuịzụtangalabaọhụrụ.
Oleeotúịzụtaahaọhụrụngalaba si na-edeba aha?
Ịnweta ala nke onwegịruoụzọabụọ：
Onezụtanke onyeọzọnwere ugbu a.
Enwere uru naọghọmdịnaụzọabụọahụmanan’ikpeazụ、ọdịn’akagịmaịchọrọịkwụụgwọmakaadreesịdịokeọnụma ama ama（ngalabandịna-arụaọaọrụ）ma n maka ngalabaọhụrụ）.
Otu iheịchọrọịtụlebụotu esiakpọahagị.
Dịka e kwuru nambụ-A ezigbo aha ngalaba nwere ikeịbụihe na-ekpebi ihe na-eme maọbụagbaji ikagị、ya mere jiri akagịhọrọotu.
Ugbu a naịkpebiri na ngalaba ahadịegwu、ọbụoge ijichọpụtama aha ngalabaahụịchọrọnweredịmaọbụ.
Na-enyocha ma ngalaba aha nnwetadịmfe。 Ịnwere ike imenchọpụtadịmfe na otu n’ime ngalaba na-edebanye aha; maọbụ、jirisistemụọchụchọWhois iji nyochaa ma aha ngalabagịdịmaọbụna e was.
Ọbụrụna ngalaba ahaịchọrọadịghịadị、gbalịaịhụmaọbụrụnamgbatịdịichedịnụkama.
Ịnwere ikeịlelemaọbụrụna ngalaba ahadịHover.
2. Debanye ahagịna ngalaba aha na ngalaba na-edeba aha
Aha ngalabaịhọọrọzuru oke ma kwenyesiri ike naọdị、ugbu aọbụoge itinye aha ngalaba n’onwe ya.
Debanye aha ngalaba maọbụrụnaọdị.
mgbeịdebanyere ngalaba aha、ozi niile nkekọntaktịgịnankọwankọwanwenkọwazuru ezu n’ime WHOIS.
Nke apụtarankọwadịkaadreesịozi-egị、adreesịụlọ、nọmbaekwentị、wdg、ga-eme kandịmmadụmara.
Ọbụrụnaịchọrọịchọtaozi nzuzogịna oghe、ịnwere ikeịhọrọịdenyeaha ngalabagịna nzuzo kaịgharaịchekwaozikọntaktịgịn’akaọhana eze.
Ọnụahịamaka ijiọrụndebanye aha nzuzo nwere ikeịdịiche mana-emekarị、ọna-esi na $ 10-$ 15 kwaafọ.
Nwere ikeịdebanyeaha ngalaba maọbụrụnaọdị。 Mana、olee otuịsi eme nkeahụ?
Ụzọkacha mmabụịgaụlọọrụna-edeba aha na ngalaba。 A ngalaba regsitrar ga-ekwe kaịdenyere ahagịna ngalaba aha ma site kwaafọcontracts maọbụa ogologo ogenkwekọrịta.
123登録 £11.99 £11.99 £4.99 /afọ
Domain.com $ 9.99 /afọ $ 10.99 /afọ –
ガンディ €12.54 /afọ €16.50 /afọ –
GoDaddy $ 12.17 /afọ $ 12.17 /afọ $ 7.99 /afọ
ホバー 12.99ドル/afọ $ 15.49 /afọ 自由
あは安い $ 10.69 /afọ 12.88ドル/afọ 自由
NgwọtaNtanetị $ 34.99 /afọ $ 32.99 /afọ $ 9.99 /afọ
Ngalaba na-edebanye aha na ngalabaga-akwụgịobere ego nke na-agbaso n’etiti $ 10-$ 15 kwaafọ、Otúọdị、ngalaba ahandịdịeluna-achọga-eri ihekarịankwụnyembụahụ.
Ngalabadịokéọnụahịanwere ike irurutụtụpuku dollar ma mgbe nkeahụgasịrị、ụgwọakwụmụgwọahụbụọnụọgụgụdịmma（$ 10-$ 15 kwaafọ）.
Mmelite：Cloudflaredịka ngalaba Aha na-edeba aha
Cloudflare emeela aha ha na-edebanye aha ha nkena-enweghịọnụahịantinye ego ma na-enyeọnụahịaahịamaka TLDsdịka.com、.net、.io、na wdg。 Ugbu a、ọrụahụbụnanịndịahịaCloudflaredịugbu a nakwa na ha ga-debanye aka na Ntinye Mmalite ha aga-akpọtụrụakwụkwọahụna usoro ihe omumeahụ.
Ọnwere ikeịzụtangalaba aha ozugbo site na onyena-arụụrụweebụsaịtịmaọbụụlọọrụnhazi?
Ọtụtụndịna-ewuụlọọrụna-enye ikikeịzụtangalaba ozugboịmepụtarasaịtịna ikpo okwu ha.
Ụfọdụn’imendịna-ewuụlọọrụkacha mma taa、dịka Wix or Obiọjọọ、ga-enyegịngalaba aha omenala n’efu maka otuafọmaọbụrụnaịdebanyereatụmatụha kwaafọ.
Otúọdị、egoọhụrụahụnwere ikeịdịiche na-adabere n’elu ikpo okwu n’onwe ya na Wix na-enye $ 14.95 kwaafọijimegharịamgbe Weeblydịntakịrịọnụna $ 19.95.
Ọbụezie naọnwere ikeịbụntakịrịọnụahịatụnyereịdenyengalaba onwegị、uru nkeịzụtangalaba aha omenala site na onye na-ewu ihe naweebụbụnaịnwere ikejọọrna nabog na na nabog na na na oggala na nbebre na be -enweghị.
Kedu otu esizụtaaha ahadịugbu a n’aka onye nwe ya?
Kedu ihe maọbụrụnaịchọrọịzụtangalabana-arụọrụugbu a?
Ịnwere ikeịhọrọịzụtangalabana-arụsiọrụike ma nyefee ikike site naọrụndịdịka aha ngalaba aha.
Aha njirimara na-adabere na nnwere onwe nkendịọzọnwere onwe ha nke na-enyere akan’ịzụahịanke ngalaba aha naịntanetị。 Ebendịa na-enyeụzọdịmma maka makandịzụrụịzụtaaha ngalaba site n’akandịna-ereákwàna-achọka haha​​pụaha ha.
E nwereọtụtụaha ngalaba ahandịụrụdịnụ、mana ebe abụole na oleịnwere ikeịlele：Escrow.com、Sedo、na BuyDomains.
Otu esizụtangalaba site n’iji ntu
Kaanyịkwuo naịchọtarangalaba aha ma magịma onye ire ereahụkpebiri na ego。難問のナアグ：Oleeotúịna-akwụụgwọna-akwụụgwọego ma jide n’aka na onye nwe na-enyefe ngalaba ngalabagị?
Nkeahụbụebe escrow abata。 Ịnwere ike ijiọrụescrow iji jide n’aka naazụmahịaahụna-aga n’ihu。 Kedu ka i si eme nkeahụ？ Nke abụotú：
Debeazụmahịan’etitigịna onye na ere ya
Debanye aha naakaụntụnasaịtịescrow、machọpụtaokwu nkeazụmahịaahụn’etitigịna onye na ere、nkegụnyereaha ngalaba（s）na ire ere.
Ozugbo i kpebiri na egoahụ、ịna-akwụụgwọgị（site na waya、kaadịakwụmụgwọmaọbụusoroọbụlaọzọ）naụlọọrụahụ.
a na-esi n’aka onye na-ereregịaha ngalabaahụ
Mgbeụlọọrụahụna-enweta ma nyochaa egoahụ、ha ga-ezitere onye na-ereahịakaọnyefeegịngalaba aha.
Kwenye naịnatara aha ngalaba aha
Ịga-ekwenye naụlọọrụescrow na nwe nke aha ngalabaahụebutelagị。 Jiri WHOISまたはWHSR WebホストSpy ijichọpụtama emelitelaprofaịlụonye nwe maọbụ.
Onye na-ere ere na-anata ego site nasaịtịọrụescrow
Ụlọọrụahụga-achọpụtana ahafela ngalaba ahaahụma ha ga-enye onye na-ere ya egoahụ、na-efu ego ha。 （Ịnwere ike ikpebi tupundịọzọakwụụgwọahụmaọbụmee kaọgbadaa n’etiti。）
Esichọpụtauru nke onye nwechara aha ngalaba
mgbeịna-achọmaka ngalaba ahambụ、nke ana-ahụkarịnaọrụndịna-ereahịa、ndịna-ere ya onwe ha、naụlọahịandịịreahịa-ịga-achọpụtana uru ha nbe nikere nwere nwere nwere nwere ọbụlasite na ole na ole dollar ruo elu maọbụisii maọbụọnụọgụgụasaa.
Ndịa nwere ikeọgaghịabụebekachasịmma iji nweta ngalaba aha maọbụrụnaịna-amalite.
Ot’u otu ihe di ka ogologo、asusu、ihe di iche iche、na ndu ndi mmadu。 Enweghịusoroọbụlanwere ike inyegịụgwọzuru oke。 Otúọdị、e nwereụzọ、iji nyegịatụmatụntụrụndụnke aha ngalaba maọchọrọntakịrịnyocha nkegị.
1- Iji Na-ere NdenyeAhịa
Ọchịchịdịmma nke isi ijighọtaotúe si jiri ngalabakpọrọihebụsiten’ịleahịaahịandịna-adịbeghịanya。 Ile anya naahịandịana-adịbeghịanya nwere ikeịnyegịotuụdịngalaba ana-azụna maka ole.
DNJournal a a ngalabaahịaakụkọnke ha na-emelite ma na ya、hadepụtaraaha ngalabandịna-ere n’ogena-adịbeghịanya site n’akaọtụtụọrụngalaba。 mgbeịna-elele anya、geentịna isiokwu nke ngalabaahụ、ogologo、na ihendịọzọmetụtaraya iji nweta echiche nke otu aha aha njirimara.
Akụkọnchịkwaahịampagharabipụtarana DN Journal（2018年5月）
Nseta ihuenyo nke DN Journal ngalaba販売レポート.
Ọdịmkpa iburu n’uche naakụkọahụna-ekpuchi obereọnụọgụgụngalaba aha、ya mere、ọbụghịkpọmkwemndepụtakachasị.
2- Iji NgwudataAtụmatụNtanetịOnline
Ụzọọzọijichọpụtauru nke ngalababụsite naọrụnyochaa ngalaba maọbụngwáọrụọnụahịa。 Ebenrụọrụndịa ga-enyegịohereịbanyeotu aha ngalaba aha ma nyegịegoịga-atụaro maka ya.
Ụfọdụn’imesaịtịndịịnwere ikeịlelebụEstibot、WebOutlook、na Nyochaa URL.
Ebendịachọpụtauru nke ngalaba na-eji ihemetụtaraSEOdịka ogoọchụchọ、isiokwu、Alexaọkwa、nyochaọbụla、ọnụọgụgụnkeọchụchọ、naụgwọkwa click.
Otu iheịchọrọbụnasaịtịdịiche iche nwere ikeịnyegịatụmatụdịiche iche。 Atụmatụdịmma ga-ejiọtụtụebedịiche iche ma jiri hatụnyereịnyegịnyochadịmma nke aha ngalaba aha.
Ọzọ、enwereghi ugwo ego makaịzụtangalaba aha maịnwere ike ichere ha ka ha na-agbanwe ngwa ngwa。 Ọbụrụnaịchọrọịchọtaizugbe ngalaba aha、ịnwere ikeịganasaịtịdịkaEbum n’ucheまたはZụrụngalaba iji nweemmetụtamakaụgwọ.
Debe na ngalaba、wee banyeọrụ
Site ugbu a、ịga-enwerịrịozi zuru oke iji nyeregịaka denyere aha aha omenala maka akara maọbụazụmahịagịonwegị.
maọbụsite na ebenrụọrụweebụna-ewuụlọmaọbụna ngalaba na-edeba ahasaịtị、nwere ngalaba ahakwesịrịịbụihembụịmechara tupuịna-ebindụ。 Ozugbo i nwetara nkeahụ、oge eruola kaịlekwasịanya iwu ulo oru gi.